Ihe ngosi HTC Ocean na-agbakwunye otu igwefoto dị ka Google Pixel | Gam akporosis
Ọkọlọtọ HTC mara ama maka enye nnukwu foto yana nke kacha mma na ahịa. Otu HTC 10 bụ otu n'ime ekwentị kacha mma n'afọ, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ihi aha ọjọọ nke onye na-emepụta Taiwanese ka e lebara ya anya na-enwetaghị nnukwu ewu ewu ma ọ fọrọ nke nta ka ahụghị ya mgbe ọ na-eji ike dị ukwuu Huawei, LG, Xiaomi ma ọ bụ Samsung .
HTC Ocean Note bụ ekwentị ọzọ nke a na-aga igosi na taa anyị maara na otu n'ime ube ya ga-abụ foto site n'inwe otu ihe mmetụta igwefoto dị ka Google Pixel, ekwentị kacha mma ugbu a n'ihe gbasara foto. Ma ọ ga-enwe ụfọdụ mmezi tweaks agbakwunyere na ọbụna gbalịa ịkafe ihe nnukwu ekwentị G nwetara.
Oke Osimiri ga-abụ ekwentị nyere na otu ụdịdị dị ka Google Pixel. Nke a pụtara na ọ ga - enwe mgbawa Snapdragon 821, 4GB RAM, yana otu igwefoto 12.3MP sitere na Sony. Ọfụmawo na igwefoto ugbu a ga-enwe ike iti nke Pixel nke nwere akara 89 ugbu a.Ọ bụrụ na anyị lelee ka HTC 10 nọ na nke abụọ na akara 88, ọ ga-abụ na ọ ga-abụ na nke a na-eme.
Banyere imewe, si ẹdụk oyiyi, ị pụrụ ịhụ otú ebughi ụzọ nke ngwaọrụ HTC dị. Ahụ na akụkụ ya na akụkụ ya dị mma nke nwere eriri antenna yiri nke A A9. Ọ bụ n'azụ ebe a na-ekwusi ike ma mee ka ọla ahụ chọọ ya mma.
Ngwaọrụ nke yiri ka ọ dị gịrịgịrị, ọ bụ ezie na igwefoto na-egosi dị ka onye protagonist na azụ. Oke Osimiri bu otu n'ime ngwaọrụ atọ na HTC gaara akwadebe maka nkeji iri na ise a nke 2017.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Ihe ngosi HTC Ocean ga-eji otu igwefoto dị ka Google Pixel nwere mgbakwunye ndị ọzọ
Ostia dị ka Samsung S6
Ọ bụrụ na ọ bụghị maka lens ahụ nke pụtara apụ nke ukwuu ... ee, o nwere nnukwu oyiyi
Nke a bụ otú WhatsApp Ọnọdụ si arụ ọrụ